"Casa Amapola" en Embalse, Calamuchita. - I-Airbnb
Indlu itholakala emigwaqweni embalwa ukusuka esifundeni sezentengiselwano, ukufinyelela okulula kusuka ku-Niver 5, amabhuloho ayisishiyagalombili ukusuka echibini, cishe amabhuloho amane ukusuka esikhungweni sezemidlalo, amakhilomitha angu-1 ukusuka endaweni yehhotela.
Indlu ithokomele kakhulu, phakathi kwefenisha yesimanje neyasemaphandleni, ihlangene benza indawo egqamile nethokomele, i-patio enkulu eluhlaza, enezitshalo zezitshalo, elungele abantu ababili noma abane. Ukukhanya okuhle, umnyango omkhulu wefasitela oxhumanisa ingaphakathi negalari esebenza njengento ebalulekile.
4.67 · 16 okushiwo abanye
indawo ithule, indawo yokuhlala futhi indawo yokuhweba ikude ngezakhiwo ezine.
Uma ngise-Embalse, ngingakunikeza amacebiso okuthi yini ongayivakashela endaweni, uma kungenjalo, abazali bami bazonakekela izicelo zakho.